Taalibaan ayaa 12.3 milyan oo doolar oo caddaan iyo dahab ah ka qaatay saraakiil hore, kuna celi bangiga qaranka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Afgaanistaan » Taalibaan ayaa 12.3 milyan oo doolar oo caddaan iyo dahab ah ka qaatay saraakiil hore, kuna celi bangiga qaranka
Wararka Afgaanistaan • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Taalibaan ayaa 12.3 milyan oo doolar oo caddaan iyo dahab ah ka qaatay saraakiil hore, waxayna dib ugu celisay bangiga qaranka
Baararka lacagta iyo dahabka ah ayay Daalibaan ka soo heleen guryihii saraakiisha maamulkii hore ee Afgaanistaan ​​iyo xafiisyadii maxaliga ahaa ee wakaaladdii sirdoonka ee dawladdii hore waxaana dib loogu celiyey khasnadda Bangiga Da Afganistan, bangiga ayaa bayaankiisa ku sheegay.
Daalibaan ayaa 12.3 milyan oo doolar oo caddaan iyo dahab ah ka qabsaday guryihii iyo xafiisyadii maamulkii hore ee Afghanistan iyo saraakiisha amniga.
Alaabo qaali ah oo gacanta lagu dhigay ayay saraakiisha Daalibaan ku wareejiyeen Da Afghanistan Bank oo ah bangiga dhexe ee dalka.
Sida lagu sheegay bayaanka bangiga, wareejinta hantida ayaa cadaynaysa sida ay Daalibaan uga go’an tahay hufnaanta.
Bangiga Da Afganistan (DAB), oo ah bangiga dhexe ee dalka, ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku dhawaaqay in Daalibaan ay ku wareejisay mas’uuliyiinta bangiga lacag dhan 12.3 milyan oo doollarka Mareykanka ah iyo xoogaa dahab ah.
"Saraakiisha Imaarada Islaamiga Afghanistan markii ay hantida ku wareejiyeen khasnadda qaranka waxay caddeeyeen sida ay uga go'an tahay daahfurnaanta," Bangiga Da Afgaanistaanayaa lagu yiri qoraalka.
Ka dib markii ay la wareegeen caasimada Kabul 15kii Ogosto, the Taliban ayaa ku dhawaaqay in la dhisayo xukuumad kumeel gaar ah 7 -dii Sebtembar, iyadoo loo magacaabay dhowr wasiir ku -xigeen iyo ku -simaha guddoomiyaha bangiga dhexe ee Afghanistan.
Bangiga Da Afgaanistaan waa bangiga dhexe ee Afgaanistaan. Waxay nidaamisaa dhammaan hawlgallada bangiyada iyo maaraynta lacagaha ee Afgaanistaan. Bangigu wuxuu hadda ku leeyahay 46 laamood dalka oo dhan, iyadoo shan ka mid ahi ay ku yaalliin Kabul, halkaas oo xarunta bangigu sidoo kale ku taal.
The Taliban waxay xoog ku qabsadeen Afgaanistaan ​​laba toddobaad ka hor inta aan Mareykanku ku dhawaaqin inuu dhammaystiro bixitaankiisa ciidammada kadib dagaal labaatan sano socday.
Kacdoon -wadayaashu waxay ku duuleen waddanka oo dhan, waxayna qabsadeen dhammaan magaalooyinkii waaweynaa maalmo gudahood, markii ciidammada amniga Afqaanistaan ​​ee ay tababaraan oo qalabeeyeen Mareykanka iyo xulafadiisa.
Madaxweynihii hore ee Afgaanistaan ​​Ashraf Ghani ayaa gaajooday oo wax yar ka sheegay hadalada guud ee Taliban markii ay ku baaheen dalka oo dhan. Markii ay Daalibaan gaareen magaalada caasimadda ah ee Kabul, Ghani wuxuu ka cararay Afgaanistaan, iyadoo lagu eedeeyey inuu haysto lacag dhan $ 169 milyan oo doolar, isagoo ku andacoonaya inuu doortay inuu ka tago dalka si uusan dhiig dambe u daadan.
Daalibaan waxay doonayeen inay isu soo bandhigaan sidii ciidan dhexdhexaad ah sanadihii la soo dhaafay. Tan iyo markii ay xilka la wareegeen, waxay ballanqaadeen inay xushmeyn doonaan xuquuqda haweenka, ayna cafin doonaan kuwii la dagaallamay ayna ka hortagi doonaan in Afghanistan loo adeegsado saldhigyada weerarada argagixisada. Laakiin dad badan oo reer Afghanistan ah ayaa shaki ka qaba ballanqaadyadaas.